बारीमा के खाने | Absolut यात्रा
मारुउजेन | | इटाली
संसारको सबैभन्दा प्रसिद्ध खाना मध्ये एक इटालियन हो, त्यसैले यात्रा गर्दा केही किलो नथप्नु असंभव छ। दक्षिण जाँदा हामी एक सबैभन्दा लोकप्रिय र पर्यटन शहरहरू भेट गर्छौं, बारी, त्यसैले आज हामी यसको बारेमा सिक्नेछौं बारीमा के खानुहुन्छ।
सत्य यो हो कि इटालियाली खाना पाएको छ र यसले अझै पनि यसको सीमानाका छिमेकीहरूको भान्छाको प्रभाव प्राप्त गर्दछ, जबकि उत्तरमा केही फ्रान्सेली खाना छ भने दक्षिणतिर भाँडामा बढी भूमध्यसागर छ, माछा, जैतुनको तेल र टमाटरको साथ। त्यसो भए, यस जानकारीलाई लेख्नुहोस् बारीमा खानको मजा लिन।
1 बारी खाना
2 बेक्ड पास्ता
3 काचो माछा
4 समतल रोटी
7 आलु, चामल र सिपी कीरा
10 घोडा काट्नु
बरी एक प्रसिद्ध इटालियन शहर, अवस्थित छ नेपल्स र पालेर्मो बीच, सुन्दरको तटमा एड्रियाटिक समुद्री। यो मध्यकालीन महल, रोमन विरासत, दरबार र थिएटर छ, त्यसैले सांस्कृतिक जीवन गैस्ट्रोनोमिक जस्तै रोचक छ।
भूमध्यसागरीय तट भनेको एक हो जुन यसको खानाको मूल कुरा प्रदान गर्दछ, त्यो हो माछा विविध, अक्टोपस सधैं ताजा, समुद्री अर्चिन र स्वादिष्ट सिपी कीरा। त्यहाँ माछा र शेलफिशहरू छन् जुन कच्चा खान्छन्, तर त्यहाँ अरू पनि छन् जुन खाना पकाइन्छन्। यो अन्तिम समूहमा प्रविष्ट गर्नुहोस् लब्स्टरहरू, क्ल्यामहरू र झींगा। सब भन्दा क्लासिक सहयोगी पास्ता स्थानीय तरकारीहरू र राम्रो-अनुभवी सॉसको साथ मिसिन्छ।
बारीको वरिपरि भूमि तिनीहरूको गुणवत्ताको लागि प्रसिद्ध छ जैतून का तेल, तर पनि द्वारा लसुन, the ताजा तरकारीहरू, the cilantro, लास काखरी, aubergines, फसल बीन्स र छोला। सबै एकसाथ संयुक्त छन्, उदाहरण को लागी, लोकप्रिय मा Minestrone सूप.
तर यी आधारभूत सामग्रीहरू जानेर, अब बारी खानाको सबैभन्दा राम्रा-राम्रा पकवानहरूको बारेमा कुरा गरौं, त्यसैले हामी सँगै एक सूची राख्ने सुरू गर्न सक्छौं। बारीमा के खानुहुन्छ।
Es बेक्ड पास्ता। यो लेन्टको सुरूमा सुँगुर र अण्डाहरूसहित वा आइतवारको थालको रूपमा तयार पारिएको थियो, तर आज यो हप्ताको कुनै पनि समयमा खान सकिन्छ र रेस्टुराँ मेनूमा सधैं हुन्छ।
साधारणमा पास्ताको लागि, बारीमा पास्ता एक साधारण तरीकाले बनाइएको छ, पानी, पीठो र नुन संग, र धेरै भाँडा को आधार मा छ। क्लासिक ओरेचीट हुन्, जुन हातले आकार दिएका हुन्छन्, वा क्याभेटेलि र फ्रिसली जुन ससलाई राम्रोसँग शोषण गर्न बनाइन्छन्, जहिले पनि तरकारी, मासु वा माछाबाट बनाइन्छ।
माथि हामीले भनेका थियौं भूमध्य समुद्री तटले बारीको भोजनमा माछा र समुद्री खाना प्रदान गर्दछ, र कहिलेकाँही यी पकाइन्छन् र कहिले कच्चा खाइन्छन्। कच्चा माछा जापानीहरूको आविष्कार होईन र यहाँका मानिसहरूले यसलाई स्वादिष्ट पदार्थ पनि ठान्छन्। यो एपीरिटिफको रूपमा वा द्रुत खाजाको रूपमा खाइन्छ मछुवाबाट सिधै किनेको।
माछा, तर अक्टोपस, क्लैम्स, लब्स्टर ... र हो, कागतीको रस बिना, त्यसोभए तपाईंले फिल्टरको बिना समुद्रको सबैभन्दा शक्तिशाली स्वादहरूका लागि जयकार गर्नुपर्नेछ।
यहाँ फोकसिया साधारण स्ट्रीट फूड मात्र होइन, यो लगभग धार्मिक अनुभव हो, उनीहरू भन्छन। यो डिश संयोजन गर्दछ पीठो, पानी, नुन, तेल र खमीर, र टमाटर, जैतून, जडिबुटी र कहिलेकाँही आलुहरू थपिन्छन्। रातो आलुको साथ संस्करण जुन एक अर्को कभर ताजा टमाटर को स्वादिष्ट छ।
फोकसिया यो मुख्य पकवान वा एक खाजा मात्र हुन सक्छ, तर तपाईं शहर मा सबै पेस्ट्री पसलहरु मा यो पाउनुहुनेछ। एउटा राम्रो लक्जरी फिओर बेकरी हो, एउटा सुन्दर गल्लीमा अवस्थित सान निकोलको चर्च र सान सबिनोको क्याथेड्रलबाट केही चरणहरू।
यो बारीको एक धेरै परम्परागत सदस्य हो सबै भान्छामा उपस्थित छs म सागग्लिओज्जेको बारेमा कुरा गर्दैछु, कन्मीमेल पोर्रिज, polenta, जुन वर्ग आकार दिइन्छ, स्लाइसमा काटिन्छ र तातो तेलमा डुबाइन्छ। परिणाम नुन, सुनौलो र धेरै स्वादिष्ट आटा हो जुन व्यापक रूपमा स्थानीय मानिसहरूले खान्छन्।
बारीमा सब भन्दा लोकप्रिय सागाग्लुइज़े कुकहरू मारिया डे स्गागलियोजे हो। आज उनी 90 ० बर्ष भन्दा बढी उमेरको हुनुपर्दछ, यदि उनी अझै जीवित छिन, तर उनी प्रायः आफ्नो ढोकामा पकाउँछिन् र तिनीहरूलाई १ रeयूरो बीचमा बेच्छिन्। उहाँ यस सन्दर्भमा जीवित कथा हुनुहुन्छ बारी मा सडक खाना.
यो वर्षको कुनै पनि समयमा साथीहरू प्राप्त गर्न क्लासिक हो। परम्परा अनुसार यसको विस्तारले सम्पूर्ण परिवारले भाग लिन्छ, टेबल वरिपरि, सबै एक साथ आटा बनाउने। त्यो मास पछि Mozzarella र टमाटर भरिएको, नजिक र फ्राई.
बारीमा त्यहाँ यस क्लासिक को धेरै रूपहरू छन्, तर सबैभन्दा लोकप्रिय मध्ये एक हो मासु वा ट्यापले भरिएकासंयुक्त राज्य अमेरिका खाना यो राम्रो पान्झेरोटिस किन्नको लागि राम्रो ठाउँ हो र तिनीहरूलाई खानु मध्यकालीन पर्खालहरू, मुराग्लियाबाट हिंड्दा।
आलु, चामल र सिपी कीरा
बारी भोजनबाट एक धेरै नै क्लासिक पहिलो पाठ्यक्रम। मा जमिन र समुद्री उत्पादनहरु मास्टर्टाइज्ड छन्। त्यहाँ कुन तत्व हुन्छ? कसैले निश्चित रूपमा भन्न सक्दैन र यो आँखा र कुकको अनुभवमा छ, केवल यस प्रकारले सन्तुलन प्राप्त हुन्छ, उत्तम सन्तुलन।
स्पष्ट रूपमा, यो हजुरआमाहरू वा आमाहरू हुन् जसको हरेक परिवारमा त्यो जादू छ।
हामी यसलाई पासिंगमा राख्छौं जब हामी बारीमा पास्ताको बारेमा कुरा गर्छौं। यो बारी मा सबै भन्दा क्लासिक पास्ता हो र भनिन्छ कि यो यस्तो भनिन्छ किनकि यो सानो कानसँग मिल्दोजुल्दो छ। यहाँ वरिपरि तिनीहरू पनि उनलाई कल strascenate, एक शब्द जुन यो कसरी तयार पारिएको छ सम्बन्धित छ: एउटा चक्कुको साथ आटा दर्जनौं साना टुक्रामा टुक्रा टुक्रा पारिन्छ र त्यसपछि तिनीहरूलाई टर्निप टाउकोसँग मिलाइन्छ, जुन धेरै स्वादिष्ट हुन्छ।
तपाईं यो कहाँ खान सक्नुहुन्छ? जहाँसुकै, तर उदाहरणका लागि, बरीको पुरानो शहरमा कास्टेलो स्वीभोको अगाडि तपाईले एउटा सडक देख्नुहुनेछ जुन धेरै बुढी महिलाहरूले घरमा ओरेक्चीट्स बेच्दै थिए। तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि उनीहरू कसरी उनीहरूलाई यो समयमा बनाउँछन् र डिश तयार नगरी झिक्काइन्छ। स्पष्ट रूपमा, किन्नु अघि हिंड्नुहोस्। मूल्य अन्नको प्रकार अनुसार फरक हुन्छ, तर गणना गर्नुहोस् ११,००० र १,5,००० युरो बीच।
हाम्रो सूचीमा पहिलो मिठाई। यो एक को बारे मा छ पोलो फिलो आटाको साथ बनेको, क्रीमले भरिएको र हिसाब चिनीले कभर गरिएको। धेरै मिठो।
छुट्टी वा आइतवारहरूमा खाना खाँदा सँगै भेट्नु सामान्य हुन्छ र टेबलमा सधैँ देखा पर्ने डिश भनेको घोडाको चाप हो मध्यमदेखि ठूलो मासु रोल, एक मा अनुभवी रगआउट, caciocavallo चीज र पोर्क माखन भरिएको।
यो एक छ विशिष्ट सडक खाना र स्वादिष्ट। यसलाई पनि भनिन्छ पेट्टोल र यो प्रत्येक दिन बरीको ओल्ड टाउनको मुख्य सडकहरूको कुनामा गृहिणीहरूले तयार पार्छन्। पियाजा मर्कन्टाइलमा तपाईले केहि राम्रा पाउनुहुनेछ।
पपिजिज पल्लेन्टा बिना साग्लिजिजको साथ हातमा जान्छ।
हामी एक इटालियन क्लासिक बिर्सन सक्दैनौं जसको बारीमा यसको कलात्मक संस्करण छ। एक स्वादिष्ट संस्करण हो Briboche भरिएको आइसक्रिम र प्रयास गर्नको लागि एक राम्रो ठाउँ गिलाटेरिया जेंटल छ, यसको सडकमा टेबुलहरू र क्यास्टेलो नर्म्नो - सभेभोमा यसको उत्कृष्ट स्थान, बाइजान्टिन प्रतिभाको साथ।
अन्तमा, जस्तो तपाईले साकार महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ धेरै सडकको खाना छ तपाईं बस प्लाजामा वा व्यापारको बाहिरको बेन्चमा बसेर खान सक्नुहुन्छ। बारी त्यस्तै हो। अवश्य पनि तपाईं रेस्टुरेन्ट र बारहरूमा जान सक्नुहुनेछ (पारिवारिक रेस्टुरेन्ट र बारहरू प्राय: केवल नगद स्वीकार्छन्, त्यसैले दिमागमा राख्नुहोस्), तर यदि यस इटालेली शहरमा कुनै सिफारिश गरिएको छ भने, यो ठीक छ। हिंड्नुहोस्, टहल गर्नुहोस्, अरोमास र स्वादहरू स्वादहरू पछ्याउँदै यसको सडकहरूमा हराउनुहोस्।
यो त्यो हो कि प्रत्येक ढोका वा विन्डो पछाडि वा गल्लीहरूमा, रसोईहरू जो सधैं व्यस्त हुन्छन्। बिहान र दिउँसो तपाईले मान्छेहरु लाई च्याट गर्न, ह्या hanging्गआउट भएको देख्नुहुनेछ, र त्यो उत्तम छ।
Gastronomyरेस्टुरेन्ट र बारहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » बारीमा के खानुहुन्छ
के तपाई डाइभि like मन पराउनुहुन्छ? मलाई यो मन पर्छ। चुम्बन
उत्तम शरीर, शास्त्रीय ग्रीसमा सौन्दर्य